Shilalekha » सत्तागठबन्धनका कुन दलले कहाँको मेयर र उपमेयर पाउँदैछन् ? (हेर्नुस् सूचीसहित ) सत्तागठबन्धनका कुन दलले कहाँको मेयर र उपमेयर पाउँदैछन् ? (हेर्नुस् सूचीसहित ) – Shilalekha
सत्तागठबन्धनका कुन दलले कहाँको मेयर र उपमेयर पाउँदैछन् ? (हेर्नुस् सूचीसहित )
७ बैशाख २०७९, बुधबार १७:०६
काठमडाौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महानगर र उपमहानगरको भागबन्डा मिलेको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले लिखित रूपमै सहमति गरेको हो ।
६ महानगरमध्ये कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको मेयर पाएको छ भने माओवादीले भरतपुर, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० ले पोखरा र जनता समाजवादीले वीरगन्जको मेयर पाएका छन्।
११ उपमहानगरमा कांग्रेसले सात र माओवादीले दुई र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले एकरएकमा मेयर पाएका छन्। कांग्रेसका भागमा धनगढी, नेपालगन्ज, तुलसीपुर, बुटवल, कलैया, इटहरी र धरानको मेयर परेका छन्। माओवादी केन्द्रले घोराही र जितपुर सिमराको मेयर पाएको छ। एकीकृत समाजवादीले हेटौंडा र जनता समाजवादीले जनकपुरको मेयर पाएका छन्।
हेर्नुस् कसले पाए कहाँको मेयर र उपमेयर :